Ciyaaryahanka sanadka ee Afrika oo maanta lagu dhawaaqi doono - BBC Somali
Ciyaaryahanka sanadka ee Afrika oo maanta lagu dhawaaqi doono
Pierre-Emerick Aubameyang, Andre Ayew, Riyad Mahrez, Sadio Mane ama Yaya Toure ayaa loo caleemo saari doonaa jaa'isadda cayaartoyga sannadka ee Afrika ee BBC galinka dambe ee Isniinta.
Seddex ayaa lagu soo uruurin doonaa shanta cayaartoy ayadoo aysan jirin hanaan loo raacayo, waxaana toos loogala socon doonaa Barnaamijka Sport Today ee idaacadda BBC qaybta dunida la hadasha iyo barta internetka marka ay saacadu tahay 15:40 GMT (18:40 Afrikada bari).
Guulaystaha ayaa shaaca laga qaadi doonaa 17:45 GMT (20:45 Afrikada bari).
Yaa isugu soo haray tartanka abaalmarinta BBC ee laacibka Afrika 2016?
Weeraryahanka reer Gabon iyo kooxda Borussia Dortmund Aubameyang ayaa sannadkii 4aad soo galay liiska, halka Andre Aye woo u safta Gaana iyo Wst Ham, horena ugu guulaystay jaa'isadda 2011 isna sannadkii 4aad uu liiska ku jiro.
Weeraryahanka Aljeeriya iyo kooxda Leicester Mahrez ayaa ah cayaartoyga kaliya ee aan hore loo magacaabin. Sidoo kale waxaa isna cusub weeraryahanka Liverpool iyo Senegal Sadio Mane, ayadoo laacibka khadka dhexe ee Manchester city iyo Ivory Coast Yaya Toure uu 8 goor liiska soo galay, isagoo laba goorna jaa'isadda ku guulaystay. Aubameyang, oo 27 jir ah ayaa gool dhalinta horyaalka Jarmalka kaalin hore kaga jira, isagoo 2016 kooxdiisa u dhaliyey 30. Wuxuu noqday cayaartoygii ugu horreeyey ee Afrikaan ah ee loo magacaabo inuu noqdo cayaartoyga sannadka ee horyaalka Bundesliga. Sidoo kale waa cayaartoygii ugu horreeyey ee noqda cayaartoyga sannadka ee CAF, waxaana loo magacaabay in lagu daro liiska cayaartoyda loo rashaxay jaa'isadda Ballon d'Or.
Taariikhda Andre Ayew
Taariikhda Yaya Toure
Bishii Agoosto ayaa kooxda West Ham ayaa Andre Ayew 20.5 Malyan oo Gini kagala soo wareegtay Swansea. 26 jirkaas ayaa 35 kulan ka dhaliyey 12 gool.
Riyad Mahrez oo 25 jir ah ayaa isna kooxda Leicester horyaalkii ugu horreeyey la qaaday.
Sadio Mane ayaa wuxuu noqday cayaartoygii ugu qaalisanaa ee taariikhda cayaartoyda Afrikaanka, kaasoo ay Liverpool ku soo iibsatay xagaagii hore 34 Malyan ii Gini.
Anfield ayaa durba laga dareemay wuxuu sameeyey, isagoo kooxda u dhaliyey 7 gool 15 cayaarood oo ay yeesheen. Intii uusan ka soo wareegin Southampton, 8 gool ayuu sannadkan gudihiisa u dhaliyey, waxaana ku jira seddexley uu ka dhaliyey Manchester city.
Yaya Toure ayaa isna 2016 koob kale kor u qaaday isagoo u caayaraya kooxdiisa Manchester city, waana kiisii 17aad intii uu cayaarayey. Kooxdiisa ayuu la qaaday koobka League Cup, wuxuuna dhaliyey gool-ku-laadkii ugu dambeeyey ee kooxdiisa ay uga badisay cayaartii kama dambaysta ahayd. Taasi waxay ahayd cayaartii uu 33 jirkaas ku tilmaamay tii ugu fiicnayd intii uu cayaarayey.